Fifidianana eto Madagasikara: Mitaky vola koa ny zandary. | mandimby maharo
Fifidianana eto Madagasikara: Mitaky vola koa ny zandary.	Posted on 11 April 2013 by Mandimby Maharo	Toa manome rariny ilay nilaza fa “tsy hilamina ny aorian’io fifidianana io” ny resaka nataon’ireo Bebokotra teny amin’ny Toby Ratsimandrava afak’omaly. Mangataka ny hanomezana azy ireo vola sy fitaovana manko ny lehiben’ny kaomandin’ny Zandarimaria-pirenena Richard Ravalomanana ho entina hampandrina fahalemana ny fifidianana, na ao aloha io, na mandritra na aorina. 7,6 lavitrisa Ariary (2,5 tapitsisa Euro) no ilaina hanaovana io “iraka manokana”io raha ny tombana nataony. Fangatahana izay efa nataony tny alohaloha saingy nolavin’ny firenena mikambana, ary dia izao averiny angatahana amin’ny Cenit izao indray.
Manahy fifandonana eo amin’ireo mpifanolana politika manko ity manam-boninahitra ambony ity. “Ao ireo izay te hanitatra ny tetezamita. Ao ireo izay te hametraka tetezamita vaovao. Ao ireo te hamaly faty izatsy na zaroa. Ny zava-nisy nandritra izay efataona izay no afahana milaza fa tsy azo tsinitsiniavina ny mety hisin’ny korontana noho io fifidianana io” hoy izy nanamafy ny fanambarany. Niendrika fampitandremana ny amin’ny mety tsy hafahan’izy ireo mametraka tontolo mandry fahalemana amin’izao taom-pifidianana izao moa no namaranany ny teniny.
Fifanandrifin-javatra koa nefa dia tonga nanatitra fiaramanidina Tetras ho an’ny miaramila malagasy ny Ambasadaoro frantsay François Goldblatt. Teny amin’ny toby miaramila an-abakabaka Ivato no natao ny lanonana fanolorana izany fitaovana mitentina 100 hetsy Euro izany avy aùin’ny foloalindahy frantsay ho an’ny rahalahiny malagasy izany. Fiaramanidina fahatelo natolots’izy ireo ity vao azo ity. Ny Tetras izay manampy tokoa amin’ny fanaovana fisidinana hitsilovana ireo toerana mafana.
Ny fampandriampahalemana afahana manao ny fifidianana noho izany no tanjona tian’ny zandarimaria ho tratrarina. Fitonina izay ilaina raha ny fanambaran’ireo solotenan’ny vondrona iraisampirenena manao fitsidihana eto Madagasikara amin’ity herinandro ity. Ny fifidianana koa nefa tsy azo ahemotra intsony hoy ny filohan’ny Cenit atalah Béatrice satria dia miankina amin’io ny hahazoan’ny Madagasikara famatsimbola any aorina any.
Tags: fifidianana, MADAGASCAR, Madagasikara, Malagasy, Miaramila, politique, Ravalomanana, ZandaryCategories: politique, societé